Olona an-jatony voan'ny vaksiny hopitaly any UK miaraka amin'ny Delta
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Olona an-jatony voan'ny vaksiny hopitaly any UK miaraka amin'ny Delta
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Mampitandrina ny manam-pahaizana fa ny 'vaksininy dia tsy manafoana ny risika rehetra' amin'ny karazana Delta miely be izay mitondra ny 99 isan-jaton'ny aretina COVID-19 any UK.
Misy famantarana mialoha fa mety tsy hampijanona ny fifindran'ny Delta ny jabs.
Ny vaksinina rehetra ampiasaina any Angletera dia mitaky ny fahazoana mandray roa doka ny mpandray mba hidiran'ny olona tanteraka.
Manodidina ny 75 isan-jaton'ny olon-dehibe any Angletera no nahazo tifitra roa hatramin'izao.
Ao amin'ny fanavaozana farany ny coronavirus, Public Health Angleterre (PHE) Nampitandrina momba ny famantarana tany am-boalohany fa ny olona vita vaksinina dia mety ho afaka mamindra ny Delta variant an'ny COVID-19 mora toa ireo izay mbola tsy nahazo tifitra.
Raha ny famotsorana PHE, olona an-jatony vita vaksiny ao UK no nampidirina hopitaly noho ny karazana Delta COVID-19 miovaova be.
Nanomboka tamin'ny 19 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra, 55.1% amin'ireo olona 1,467 naiditra hopitaly niaraka tamin'ny karazana Delta no tsy voadinika, hoy ny PHE, raha 34.9% - na olona 512 - no nahazo fatra roa.
Ny 19 Jolay no daty nanamorana ny famerana ny fanidiana any UK.
Ny vaksinina rehetra ampiasaina any Angletera - ireo novokarin'ny AstraZeneca, Moderna ary Pfizer-BioNTech - dia mitaky ny fahazoana doka roa ho an'ny mpandray ampidirina tanteraka ny mpandray.
"Rehefa vaksiny ny ankamaroan'ny mponina, dia hahita isan-jaton'ny olona vita vaksiny any amin'ny hopitaly isika," hoy ny PHE.
Jenny Harries, tale jeneralin'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pahasalamana UK, dia nilaza fa ny tarehimarika hopitaly dia nampiseho "indray mandeha ny maha-zava-dehibe ny fandrosoantsika rehetra handray ny fatra roa vaksinina raha vantany vao vitantsika izany".
Felix Harrington hoy:
10 Aogositra 2021 amin'ny 14:23
Ny vaksinin'ny pseudo COVID-19 fanandramana dia tsy manome tsimatimanota na misoroka ny olona tsy ho voan'ny areti-mifindra, na izany aza dia miteraka voka-dratsy mahatsiravina ao anatin'izany ny fahafatesany, ary tena manimba ny hery fiarovan'ny vatana amin'ny ho avy araka ny hitantsika izao. Ireo izay mbola tsy voatsindrona tamin'ireto vaksinin'ny seminera ireto ihany no afaka mitaky tsimatimanota.
8 Aogositra 2021 amin'ny 06:08
Nigrdom, marina ve aho?
Gerard Wirth hoy:
7 Aogositra 2021 amin'ny 20:41
Ny isa manerantany dia tsy manohana ireo olona naka Astra Zeneca… ny tatitra toy izany dia tsy maintsy mampiseho ny isan'ireo nanao vaksininy tsirairay avy ary nitokana ho an'ny sary nahita fianarana.
IZAO… .. ny vaksiny dia tsy afaka manipy ny fitsipi-pifehezana ny anti-covid ivelan'ny varavarankely…. tsy maintsy manohy mampiasa saron-tava ianao… .raha mitsidika anao ny olona na manao sarontava vaksiny aza ianao ary azo antoka fa hisoroka ny fanakaikezana ara-batana. Mety hanelingelina ny rehetra izany fa hanampy izany. Torohevitra tsara indrindra fa aza manatrika fivoriana lehibe 'tsy saron-tava'… mitafy fitateram-bahoaka… .. amin'ny birao na asa mitovy.
Paul Hudson hoy:
7 Aogositra 2021 amin'ny 20:00
Eny fa inona ny tahan'ny fahafatesany? Ilaina ho an'ny teny manodidina. Raha voan'ny virus ny olona vita vaksiny nefa maty ny isan-jato kely na mila hopitaly, amin'ny firy i Covid no lasa mitovy amin'ny gripa mahazatra?